Akụkọ kacha ọhụrụ |
The Development Ugbu a nke Ngwá Ọrụ akpụzi Industry
Na-aga n'ihu mmepe nke China na Ngwá Ọrụ akpụzi ụlọ ọrụ, ina na ina ngwá ụlọ ebu ngwaahịa na-nwayọọ nwayọọ na-amụba. Uto a ewetala nkwalite dị ukwuu n'ịkwalite teknụzụ ụlọ ọrụ. N'ọdịnihu nke ụlọ ọrụ, ụlọ ndị na-ahụ maka teknụzụ ...
Olee otú Mee Air oyi akpụzi nke Higher Quality
1. A ghaghị ichikota atụmatụ na imepụta ihe ọ bụla nke na-ajụ oyi nke oge ọ bụla: site na njikwa arụmọrụ nke ogbako ahụ, na-achịkwa iwepụ usoro ọrụ, site na nhazi usoro ziri ezi, nhazi akụkụ nke ọma na akụkụ ziri ezi. nyocha, ...
Obere Okpomoku di na igwe Dustbin nwere ike ibute ihe ojoo
Ọbụna mgbe agbaze ahụ na-abanye na Dustbin Mold, ọsọ ọsọ na-agbanwe agbanwe ma ọnụọgụ ya na-agbanwe. Agbaze agbazere agbaze dị elu mgbe ọ na-abanye ebe ọnụ ụzọ ámá gutter, mana agbazere agbaze agbazere na-amalite ibelata mgbe ọ banyere n'ime oghere ebu, ya bụ, ọkwa ntụ ọka na-ejuputa. Ọdịiche dị na t ...
Otu esi ejizi edozi ihe eji edozi oche oche
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na-apụta ọ bụghị naanị na oghere nke oche Mould, kamakwa mgbe etinyere nkuku dị nkọ nke isiokwu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, elu nke nkuku dị elu nke ihe na-adịkarị nro, mana isi awọ na-adịghị mma n'azụ ya. Nke a bụkwa n'ihi oke ọnụọgụ na ntinye ogwu ...
Nzube nke ikuku nke ikuku na-ekpebi udiri agha
N'ụzọ bụ isi, nhazi nke Ebu Ikuku ikuku na-ekpebi ọchịchọ ịlụ agha. O siri ike igbochi omume a site na ịgbanwe ọnọdụ ịkpụzi. N'ikpeazụ, nsogbu ga-edozi si imewe na mma nke ikuku oyi ebu. Ihe omuma a bu ihe kpatara ya ...
Site na ule na-aga n'ihu ikpe ikpe nke Dustbin Mould
Maka Dustbin Mold, isi ihe bụ asymmetry (ndụ ebu na ogologo oge ịwụ mma) na akara arụmọrụ (afụ mma), ya mere chọrọ nhazi akụrụngwa ziri ezi. Otu n'ime usoro dị mkpa bụ njikwa mma, nke ga - adị mma ma ọ bụrụ na onye na - ebubata ya nwere ezigbo mma ...
Guzosie A Perfect Manufacturing Usoro maka Daily Necessities akpụzi
Otu esi emepụta usoro nrụpụta zuru oke maka akụkụ nke ihe na-aga nke ọma kwa ụbọchị dị mkpa na-adabere na oke nkenke nke mkpa ụbọchị a na-eji. Ọ bụ ntọala nke imerime ngwaahịa. Nkenke nke akụkụ na-adị kwa ụbọchị mkpa nke ebu akụkụ nhazi, ...
BATỌRỌ 20rụ 2021
Alaghachi na-arụ ọrụ 2021 Chinese mmiri biri na anyị na-abịa azụ na-arụ ọrụ! Isi ahia Heya na-elekwasị anya n'ichepụta ihe nkedo plastik nwere ihe karịrị afọ 10. Dị ka ezinụlọ Ebu, kitchenware ọgwụ Ebu, home ngwa oru ebu ngwaọrụ, ụlọ ọrụ na ugbo inj ...